Politika… fampandrosoana | NewsMada
Mby aiza ny hoe fampandrosoana amin’izao? Mila politika mazava izay: ny foto-kevi-dehibe ny amin’ny hoe fampandrosoana, ny vinam-piarahamonina hanatrarana izay, ny fampitaovana sy izay hanatanteraka azy, ny tetiandro…
Mby aiza? Maso miara-mahita ny rehetra, sofina miara-mandre. Tsy vita indray andro na efan’ny irery ny taotrano, vao mainka ny firenena. Efa mazava amin’ny rehetra izay hoe politika fampandrosoana izay amin’izao?
Politika irosoana any amin’ny fampandrosoana, fa tsy fampandrosoana ny politika toy izay nahazatra ny sasany hatramin’izay: antony politika no ihetsehana, fa tsy fanatsarana ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka.
Mba tsy ho izay fampandrosona ny politika izay intsony amin’izao? Tsy inona fa ny fisehoana sy fisekoana hoe manao sy mahavita zavatra, manana ny maro anisa, tiana sy tohanan’ny vahoaka, miavaka sy hafa no ho ny hafa…
Izany karazana lafika politika amin’izay hetsika sy asa atao izany, famitahan-tena sady famitaham-bahoaka tsotra izao. Na inona atao hoe fampandrosoana amin’izany, tsy mitondra fihatsaram-piainana fa ankosotra tsy maharitra.
Nefa tonga ho azy tsy tadiavina izay kajikajy sy paipaika politika izay, rehefa tena misy sy andehanana ary iainana ny politika… fampandrosoana: fijerena izay tena tombontsoam-pirenena, fitsinjovana ny fiainam-bahoaka…
Tsy adala ny vahoaka ka tsy hahalala raha misy ny fihatsaram-piainany andavanandro amin’izay tandrifin’andraikitry ny mpitondra: fampanjakana fandriampahalemana, fanorenana fotodrafitrasa handrosoana, fiahiana sosialy…
Raha tena miasa araka ny hetahetam-bahoaka ny mpitondra, miova ho azy koa ny tontolo politika: hihahaka ho azy amin’izao eo ny fatra-pitsikera, ny mpiandry kendry tohina hisian’ny korontan-dava hahazoan-toerana…
Amin’izany, handroso mbamin’ny fomba fanaovana politika. Ho tena fitantanana ny tanàna na ny firenena sy ny vahoaka ao aminy amin’izay izany, fa tsy fitanana na fiadiana tombontsoa manokana. Mby àry amin’izao?